Warshadda dhex -dhexaadka ah | Dhexdhexaadiyeyaasha Dabiiciga ah ee Shiinaha Soo -saareyaasha, Alaab -qeybiyeyaasha - Qeybta 4
Ketone esters waa kaabisyo sheeganaya inay jirka geliyaan ketosis, iyada oo aan qofka looga baahnayn inuu raaco cuntada ketogenic. Markay ku jirto ketosis, jidhku wuxuu u gubaa dufanka shidaalka, badiyaana waxaa lagu gaaraa iyadoo la raaco cuntada keto-dufanka badan leh, ama soonka.
Sahayda warshadda p-Benzoquinone / 1,4-Benzoquinone (PBQ) CAS No. 106-51-4
p-Benzoquinone / 1,4-Benzoquinone (PBQ)
p-Benzoquinone / 1,4-Benzoquinone (PBQ) waa qaabdhismeedka aasaasiga ah ee isku-darka quinonoid.Waxay si aad ah ugu qaybsamaan dunida dabiiciga ah, oo laga helo bakteeriyada, dhirta iyo arthropods-ka sidaa darteed quinones-ku waxay ku badan yihiin nidaamyada nolosha. Quinones waxay ka ciyaaraan door muhiim ah shaqooyinka bayoolojiga oo ay ku jiraan fosforyaalka oksida iyo wareejinta elektarooniga.
Sahayda warshadda 4-bromoaniline CAS 106-40-1 oo leh qiimo wanaagsan
4-Bromoaniline waa isku-darka halka molecule aniline lagu beddelo atom bromiin oo ku yaal booska para. Meherad ahaan ayaa la heli karaa, dhismahan waxaa laga yaabaa in loo isticmaalo dhisme dhisme ahaan, tusaale ahaan diyaarinta p-bromobiphenyl iyada oo loo marayo falcelinta Gomberg-Bachmann.
Isticmaalka cilmi baarista oo kaliya.
CAS 79-01-6 Dheecaanka Dabiiciga ah 99.6%min TCE / Trichlorethylene
Xirxirida: 280kg durbaanka
Trichlorethylene waxaa loo isticmaalaa warshado badan. Waxaa inta badan loo adeegsadaa dareere ahaan si looga saaro dufanka qaybaha birta, laakiin sidoo kale waa qayb ka mid ah dhejisyada, ka -saarayaasha rinjiga, dareeraha sixitaanka makiinadda, iyo ka -saarayaasha barta.
Jumlada 99% 1,2-Pentanediol/PTO oo leh qiimaha ugu fiican
Magaca badeecadda 1,2-Pentanediol
Daahirsanaanta (%) ≥99.5
Muuqaalka Dareere aan midab lahayn oo cad
Xidhmada ： 200kg halkii durbaan
1,2-Pentanediol waa dhexdhexaad muhiim u ah Propiconazole. Waxaa badanaa loo adeegsadaa kareemka maqaarka, kareemka indhaha, kareemka maqaarka, alaabta daryeelka ilmaha, alaabta qorraxda iyo waxyaabaha kale ee daryeelka maqaarka.
Sahayda Warshadda Dhexdhexaad Benzyl Chloride CAS 100-44-7
Xirxirida: 1 kg dhalo kasta, 200kg durbaanka ama sida aad u baahan tahay
Si weyn loogu adeegsaday SINTHESES OF FARMACEUTICALS, CHEMICALS BEACAHA, IYO DYESTUFFS TO CARFO
Sahayda Warshadda Dhadhanka Dhexdhexaad Benzaldehyde CAS 100-52-7
Benzaldehyde waxaa loo isticmaalaa keega dhadhanka iyo alaabta kale ee la dubay
Sahayda warshadaha o-Phenylenediamine (OPD) CAS 95-54-5 oo leh qiimaha ugu fiican
Phenylenediamine waa dheemanta udugga ugu fudud. Waxaa jira saddex isomers, oo kala ah o-phenylenediamine, m-phenylenediamine iyo p-phenylenediamine.
Tayo sare 1,8-Naphthalic anhydride CAS 81-84-5 oo leh qiimaha warshadda
1,8-Naphthalic anhydride waa isku-dhis dabiici ah oo leh qaaciddada C₁₀H. Waa mid ka mid ah saddex isomers oo ah naphthalic anhydride, labada kalena waa 1,2- iyo 2,3-derivatives. 1,8-isomer waxaa diyaariyey oksaydhka aerobic ee acenaphthene. 2,6-naphthalenedicarboxylic acid ayaa laga diyaarin karaa anhydride-kan.
Soo-saaraha Shiinaha wuxuu Bixiyaa Dabiiciga Genistein Powder 98% CAS 446-72-0
Budada Genistein Dabiiciga ah 98%
Codsiyada: waxaa loo isticmaali karaa daryeelka quruxda dumarka iyo ka hortagga cudurrada dhiigga iyo kansarka.
Genistein waa nooc ka mid ah maadada polyphenols oo laga heli karo soy iyo dhir cas iyo dhir kale oo leh qaab-dhismeedkeeda molecular oo la mid ah 17a-estradiol oo leh waxqabad antioxidant iyo xiriir aad u sarreeya xagga soo dhoweeyaha estrogen.
Bixinta warshadda Biochanin A CAS 491-80-5 Red Clover Extract Isoflavone budada
Ilaha dhirta: Trifolium pratense L; Warbiixiyaha Cas ee Cas
Qeybta dhirta la isticmaalo: Caleemaha & Ubaxa
Biochanin A waa isoflavone O-methylated. Biochanin A waa unug dabiici ah oo dabiici ah fasalka phytochemicals loo yaqaan flavonoids. Biochanin A waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay phytoestrogen wuxuuna leeyahay faa'iidooyin dheellitiran oo ka hortagga kansarka cuntada ah. Biochanin A ayaa sidoo kale la ogaaday inuu yahay ka -hortag daciif ah oo ah asiidh dufan amide hydrolase in vitro.